Maraykanka Oo Sharci Kusoo Roggay Shaqaalaha Aqalka Cad Kadib Markii Coronavirus Laga Helay Saraakiil Ka Tirsan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Maraykanka Oo Sharci Kusoo Roggay Shaqaalaha Aqalka Cad Kadib Markii Coronavirus Laga Helay Saraakiil Ka Tirsan
Washington(ANN)-Xukuumadda Maraykanka ee Madaxweyne Trump, ayaa kusoo rogtay amar cusub shaqaalaha ka hawlgala Aqalka cad ee looga taliyo dalkaa, waxaana lagu amray xidhtaan qalabka layskaga difaaco xannuunka Coronavirus ee Gafuur-xidhka iyo gacma-gashiga.
Amarka kasoo baxay Aqalka cad, ayaa soo baxay, kadib markii laba ka mid ah saraakiisha Aqalka cad laga helay cuddurka COVID-19, kaas oo si weyn u gil-gilay Maraykanka, isla markaana six un ugu baahay dalkaa oo hormood u noqday dalalka Aduunka ee uu aafeeyay xannuunka Coronavirus.
Sarkaalka u sareeya shaqaalaha Aqalka Cad ayaa sheegay in ay qasab tahay in shaqaalaha ay Afka xidhtaan oo ay isticmaalaan qalabka Gafuur-xidhka ee (Maaskaraha) iyo Gamaca-gashiga marka ay soo gelayaan qaybta loo yaqaano West Wing ee Aqalka Cad iyo marka ay baxayaan, marka laga reebo inta ay xafiisyada ay ku shaqaynayaan fadhiyaan.
Sidoo kale, amarka cusub ee lagu soo roggay shaqaalaha Aqalka Cad, ayaa soo ka dib markii mid ka mid ah kaaliyayaasha Madaxwaye ku xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo sarkaal aad ugu dhaw Madaxwayne Trump labadaba laga helay cuddurka COVID-19.
Mr Trump, oo ka hadlay xeerka lagu soo roggay shaqaalaha Aqalka Cad, ayaa sheegay in loo baahnaa xeerkan cusub.
Dhinaca kale, waxa karantiin la geliyay saddex xubnood oo ka mid ah guddida xakamaynta Coronavirus, kuwaas oo la sheegay in markii ay muddo labo toddobaad ah ka dib la macaamileen shaqsiyaad cuddurka laga helay ay khasab noqotay in iyagana la karantiimeeyo.
Dr Anthony Fauci, oo isagu safka horre kaga jiray dagaalka ay Maraykanku kula jiraan cuddurka Covid-19. Ayaa ka mid ah dadka iskood isu karantiimay.
Saraakiisha Aqalka Cad ee sida maalinlaha ah ula kulma Madaxwayne Trump ayaa khasab laga dhigay in xilligan si joogta ah cuddurka looga baadho, kadib markii ay xaaladda faafitaanka cuddurka iyo dhimashada uu sababay noqdeen mid sare usii kacay dalka Maraykanka.
Mr Trump ayaa sheegay in lacago badan loo qoondeyn doono si sare loogu qaado baadhitaanada gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka, iyadoo sida uu sheegay Xukuumaddiisu lacago dhan $11 bilyan u qoondaynay gobolada si loo gaadho bartilmaameedka baadhitaanada cuddurka sida xun ugu baahay dalka ee COVID-19.
warbixinihii u danbeeyay ee Maraykanka ee lagu shaaciyay degelka Worldometer, oo ah Degel tixraac oo bixiya tirinta iyo tirakoobka waqtiga-dhabta ah ee mowduucyada kala duwan, xilligana ah halka ugu weyn ee lagu ururiyo COVID-19, tira uu asiibay ee dunida oo dhan.
Waxaana lagu sheegayaa in ay dalka Maraykanka u dhanteen inta la ogyahay dad gaadhaya 83,227, qof, iyadoo 24 saacadood ee u dambeeyay cuddurka ugu dhimatay dalka Maraykanka dad gaadhaya 1,432 qof, kiisaska cusub ee saacadihii u danbeeyay ayaa noqonaya 19,018, taas oo si weyn kor ugu kicinay dhimashada iyo faafista gudaha Maraykanka ee Coronavirus, iyadoo tirada uu haleelay lagu sheegay 1,404,852 qof.